Brand – FemaleWear.net
မရတော့ဘူး Daniel Wellington ရဲ့ နာရီဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေက ဆွဲဆောင်နေပြီ
အဝတ်အစားတွေ ဖက်ရှင်တွေအကြောင်းကို ပြောရတာညည်းငွေ့လာပြီနော်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ တစ်ခြားဘာအကြောင်းရာတွေပြောရင်ကောင်းမလဲဟင်? အင်း…….. သိပြီ။ မိန်းကလေးတွေအတွက်အထူးသဖြင့် business လေဒီလေးတွေအတွက်ကတော့ အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးက ပိုအံကိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ Business lady မဟုတ်တဲ့သူလေးတွေလည်းဝယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်နော်။ ဘာလေးလဲဆိုတော့ အချိန်ကို တိတိကျကျဖော်ပြပေးတဲ့ နာရီလေးတွေပါ။ နာရီဆိုတာကတော့ မိန်းကလေးမှမဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်စီတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်လို့ ဒီအကြောင်းအရာလေးကို ဖတ်လိုက်ရင်လည်းမှားမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။…
စွန်းတန်တဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ မိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်ရဲ့ Paisely Pattern လုံချည်လေးတွေ
ဒီဇိုင်နာမိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်ရဲ့ FGM ချိတ်အကြောင်းတွေကတော့ နာမည်ကြီးပြီး ဟိုးလေးတစ်ကျော်ကျော်ဖြစ်ခဲ့ကြတာ အချစ်တို့လည်း သိမှာပေါ့နော်။ မြန်မာ့ရိုးရာချိတ်ကို နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ လှပသစ်လွင်အောင် ဖန်တီးထားခဲ့တဲ့အပြင် စျေးနှုန်းကလည်း ချိုသာလွန်းလို့ တကယ့််ကိုအကြိုက်တွေ့ခဲ့ကြတာပါနော်။ ပြီးတော့ ချိတ်ဒီဇိုင်းရော ပိတ်စအသားရောက တကယ့်ကိုဝတ်ထားမှန်းမသိသာလောက်အောင် ပေါ့ပါးပြီး ချိတ်တွေကလည်း ရေနဲ့လျှော်တာတောင်အရောင်မကျသွားလို့ ခုထက်ထိနာမည်ကျန်နေခဲ့တာနော်။ အခုလည်း FGM 1…
ရွှေမှုံကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်တဲ့ brand စျေးနှုန်းတွေကို သိချင်သွားလား?
မေလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ အသက် ၂၀ ပြည့်ပြီး ထိပ်စီးပြောင်းသွားခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလေးရွှေမှုန်ရတီကတော့ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ အငယ်ဆုံးရုပ်ရှင်မင်းသမီးလေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ သူမရဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အမြဲတမ်း update လုပ်နေတဲ့အတွက် လက်ရှိမှာ လူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်း၊ သတိထားခံရခြင်းများကိုလည်း အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုန်ကတော့ အောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်း…
Guess နဲ့ပေါင်းပြီး Collection အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Jennifer Lopez
Hollywood အနုပညာလောကရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးနေရာမှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ JLo ကတော့ အခုနောက်ပိုင်း သူမရဲ့စီးပွားရေးဘက်ကို အာရုံစိုက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ မကြောသေးခင်ရက်ပိုင်းကဘဲ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်မိတ်ကပ်လိုင်းအတွက် product အသစ်တွေ ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီးနောက် အခု Guess နဲ့ပေါင်းပြီး Fashion Collection အသစ်တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ Guess ဆိုတာကတော့…
Online မှာခေတ်စားနေတဲ့ ဂျင်းဖက်ရှင်အသစ် Sold Out ဖြစ်သွား
အခုရက်ပိုင်း လူငယ်အများကြားမှာ ရေပန်းစားခေတ်စားနေတဲ့ Jean fashion အသစ်ကြောင့် အံ့အားသင့်နေကြပါတယ်။ တချို့ကလည်း တကယ်ရော ရှိရဲ့လား? ဟာသလုပ်ထားတာများလား? ဆိုပြီး သို့လော သို့လောနဲ့ ဝေခွဲမရဖြစ်နေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီ fashion ဒီဇိုင်းကို ထုတ်လိုက်တဲ့ brand တစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ EXTREME CUT…
H&M မှာစျေးသက်သာစွာဝယ်နိုင်မယ့် လျှို့ဝှက်ချက်များ
ခုနောက်ပိုင်းမှာ နာမည်ကြီး brand တွေသာမက H&M, Forever 21, Gap, Zara, Mango စတဲ့ brand တွေလဲ online shop တွေကလဲ လူတိုင်းလက်လှမ်းမှီတဲ့ စျေးနှုန်းတွေနဲ့ online shop တွေမှာလဲ ဝယ်ရတာလွယ်ကူလာပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ H&M မှာ…